विस्थापितलाई एकीकृत बस्ती - Karobar National Economic Daily
query_builderJune 15, 2017 9:21 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1057
सिन्धुपाल्चोक: भूकम्पले आफ्नो गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा पारेपछि परिवारै विस्थापित भई आश्रय खोज्दै सेलाङको बाँसखर्क आइपुगेकी साविक बतासे–२ कि एकल महिला अमरकुमारी थापा (९२)को मुहार २५ महिनापछि उज्यालियो ।
भूकम्पपछि पाल र जस्ताको टहरामा कष्टकर बसाइ भोगेकी उनी अब सरकारी जग्गामै आफ्नो परिवारका लागि पक्की घर बन्ने भएपछि खुसी भएकी हुन् ।
भूकम्पपछि समतल स्थान रहेको जुगल गाउँपालिका–१ स्थित बाँसखर्कमा विभिन्न गाउँका भूकम्पपीडित शिविर बनाई बसेका छन् । जिल्लामा गठित कार्यदलले गरेको अध्ययनले भूकम्पपीडितको पुरानो थातथलोमा बस्न अयोग्य देखिएपछि उनीहरूलाई बस्दै आएको स्थानमै जग्गा प्रदान गरी आवास निर्माण गराउन लागिएको हो ।
यो गाउँमा १७८ भूकम्पपीडित विस्थापित शिविर बनाई बसोबास गरिरहेका छन् । यहाँ अहिले जिल्लाको पारि गाउँको नामले चिनिने विकट गाउँ गोल्चे, गुम्बा, पाङताङ, सेलाङ र बतासेका पीडित बस्दै आएका छन् । उनीहरू ९ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सामुदायिक वनमा बसिरहेका छन् ।
“पुरानो ठाउँमा जाँदा माथि भीरैभीर तल पहिरो नै पहिरो छ, हामी जान सक्दैनथ्यौं,” अहिले आफू बस्दै आएको स्थानमा नयाँ घर बन्ने जानकारी पाएपछि खुसी हुँदै एकल महिला अमरकुमारीले भनिन्, “अब मनै उज्यालो दिनै उज्यालो हुने भयो ।” उनले विस्थापित शिविरमा आइपुगेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलको टोलीलाई भगवान प्रकट भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।
अमरकुमारीसँगै रहेकी साविक सेलाङ–७ की शैलकुमारी सिलवालको पनि खुसीको सीमा रहेन । उनी छिट्टै आफ्नो घर बनाइदिनका लागि कार्यकारी प्रमुखको टोलीलाई आव्हान गर्दै थिइन् । “हामीलाई यहाँ बस्न निकै सकस छ,” उनले भनिन्, “जाडोयाममा हिउँले सताउँछ, गर्मीमा जस्ता र पालले पोलेर बस्नै सकिदैन ।”
उँमा कुनै पनि विवाद आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सबै समुदाय मिलेर अब बन्ने नयाँ बस्तीका लागि सहयोग गर्ने बताइन् । “साहै्र दुःख पाएका छौं, घर बन्ने भएपछि हामी किन विवाद गर्ने थियौं र ?” उनले थपिन् । आफू बस्दै आएको सुरक्षित स्थानमा आफ्नै लागि नयाँ सुविधासम्पन्न घर निर्माण हुने भएपछि विस्थापितहरू रमाएका छन् ।
विस्थापितहरूका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणकोे अगुवाइ, अक्सफामको सहयोग तथा सामुदायिक आत्मनिर्भरता सेवा केन्द्रको समन्वयमा एकीकृत बस्ती बनाउन अध्ययन गरिएको हो । पहिलो चरणमा साविक सेलाङको वडा ८ र ९ का विस्थापितको पुरानो थातथलोको अवलोकन गरेको थियो । सोअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण समन्वय समितिले सेलाङका विस्थापितलाई अहिले बस्दै आएको स्थानमा जग्गा दिई आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
“अहिले सेलाङका विस्थापितहरूको मात्रै पुरानो थातथलोको अध्ययन गरेका छौं,” पुनर्निर्माण प्राधिकरण समन्वय समितिका सचिवालय प्रमुख रुद्र मल्लले भने, “अब अन्य गाउँबाट आएका पीडितहरूको स्थानमा पुगेर अध्ययन गर्नेछौं, र आवश्यक कामको थालनी गरिनेछ ।” उनका अनुसार एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि अब छिट्टै प्रक्रिया पु¥याएर काम थाल्नेछौं ।
अहिले विस्थापित बसिरहेको स्था सामुदायिक वनको जग्गा हो । अहिले बसिरहेको स्थानमा घर बनाउने विस्थापितसँग जग्गा साटासाट गर्ने मल्लले बताए । “उहाँहरूले पुरानो जग्गा सरकारको नाममा दिनुपर्छ, त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई घर निर्माणका लागि सामुदायिक वनको जग्गा दिनेछौं ।” उनले भने, “प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रतिपरिवार १० आना जग्गा दिएमा पुग्ने जस्तो देखिन्छ ।”
यहाँ रहेका विस्थापितलाई अन्य स्थानमा स्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्न नसकिने अवस्था आएपछि बुधबार प्राधिकरणका प्रमुख डा. पोखरेल अवलोकनका लागि सेलाङ आइपुगेका हुन् । उनले विस्थापितसँग कुरा गर्दै अब यो ठाउँमा सुन्दर बस्ती बन्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
“राम्रो सडक, खानेपानी र बिजुलीको प्रबन्ध हुनेछ,” उनले विस्थापितसँग भने, “विद्यालय, व्यवस्थित शौचालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवन बनाइनेछ ।” उनले यो स्थानलाई पर्यटकीय गन्तब्यका रूपमा विकास गर्नका लागि विभिन्न भौतिक संरचनासमेत निर्माण गर्ने लक्ष्य भएको बताए ।
अहिले यहाँका बालबालिका दैनिक ५ घण्टासम्म हिँडेर विद्यालय जान्छन् । खानेपानीको समस्या उस्तै छ । “सरकारी मान्छे आएर गरेको कामलाई सहयोग गर्नुहोस्, कुनै विवाद नगर्नुहोस्,” डा. पोखरेलले भने, “छिट्टै छानामुनि बस्न पाउनुहुनेछ ।” उनले विस्थापितलाई बालबालिकाका लागि बालउद्यान, खेल मैदानसमेत निर्माण गर्ने बताए । बाँसखर्कमा भूकम्पलगत्तै विभिन्न गाउँबाट झण्डै ४५० परिवार सुरक्षित स्थान खोज्दै आएका थिए ।
भूकम्प बाँसखर्क एकल महिला